राजनीति Archives - Page4of 654 - खबरमञ्च खबरमञ्च
You are here: Home > राजनीति - Page 4
नेकपाको एकतामा देशनै खुशी हुनु पर्छः प्रधानमन्त्री ओली
By खबर मञ्च / April 22, 2019 / राजनीति / Comments Off on नेकपाको एकतामा देशनै खुशी हुनु पर्छः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकतामा देशनै खुशी हुनु पर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७० औं बार्षिकोत्सव समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा पहिलो पटक कम्यूनिष्ट पार्टीको सुदृढ बहुमत सहितको सरकार बनेको दुईवटा ठुला वाम पार्टी एक भएको […]
कुन जिल्लामा काे भए नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष र सचिव ? (विवरणसहित)
By खबर मञ्च / April 22, 2019 / राजनीति / Comments Off on कुन जिल्लामा काे भए नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष र सचिव ? (विवरणसहित)
काठमाडाै‌ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी एकता भएको झण्डै एक वर्षपछि जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ । आइतबार साँझ सचिवालय बैठकले नयाँ मापदण्ड तय गरेसँगै जिल्लाका पदाधिकारी चयन भएका हुन् । आइतबार साँझ बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले अन्तिम रुप दिएको जिल्ला तहको नेतृत्वको विवरण सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा तत्कालिन […]
नेकपा झापा अध्यक्षमा चिन्तन पाठक, सचिवमा मणिकुमार साङपाङ
By खबर मञ्च / April 22, 2019 / राजनीति / Comments Off on नेकपा झापा अध्यक्षमा चिन्तन पाठक, सचिवमा मणिकुमार साङपाङ
विर्तामाेड । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) झापाकाे अध्यक्षमा चिन्तन पाठक चयन भएका छन् । यस्तै झापा जिल्ला सचिवमा मणिकुमार साङपाङ चयन भएका छन् । अध्यक्ष चयन भएका पाठक तत्कालिन एमालेका झापा जिल्ला रहेका थिए । यस्तै सचिव साङपाङ नेकपा मा‍ओवादीका जिल्ला तहका नेता थिए । गएकाे स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाे अध्यक्षमा उठेका पाठक […]
‘भोट अर्कालाई दिएर कांग्रेस कमजाेर भयो भन्न मिल्छ?’
By खबर मञ्च / April 22, 2019 / राजनीति / Comments Off on ‘भोट अर्कालाई दिएर कांग्रेस कमजाेर भयो भन्न मिल्छ?’
भद्रपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस कमजाेर भयाे भन्नु गलत रहेकाे टीप्पणी गरेका छन् । झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलमा सोमबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै सभापति देउवाले कांग्रेस कहिले पनि कमजोर नबनेको दाबी गरेका हुन् । उनले भने , “प्रतिपक्षका रुपमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर भएको भन्ने कुरा गलत हाे, चुनावमा भोट अरुलाई दिने अहिले आएर कांग्रेस […]
कानून निर्माणको कामलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएनः बाबुराम भट्टराई
By खबर मञ्च / April 22, 2019 / राजनीति / Comments Off on कानून निर्माणको कामलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएनः बाबुराम भट्टराई
ललितपुर । नयाँ शक्ति नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले संविधान कार्यान्वयन हुनेगरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका संयोजक भट्टराईले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद र प्रदेश समन्वय परिषद पनि व्यवहारिक नभएको टीप्पणी समेत गरे। सोमबार […]
सरकारसँग वार्ता गर्न राप्रपाले बनायाे तीन सदस्यीय वार्ता टाेली
By खबर मञ्च / April 22, 2019 / राजनीति / Comments Off on सरकारसँग वार्ता गर्न राप्रपाले बनायाे तीन सदस्यीय वार्ता टाेली
काठमाडौँ । सरकारसँग वार्ता गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले तीन सदस्यीय वार्ता टाेली बनाएको छ । राप्रपाले वरिष्ठ नेता दिपक बोहोराको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली बनाएकाे राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख माेहन श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ । वार्ता टाेलीमा वरिष्ठ नेता बोहोरासहित महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन र वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य निरन्जन थापा रहेका छन् । […]